Shiinaha caado neefsasho 100% qoyaanka dhoobada polyester ragga warshad shaati iyo saarayaasha | Himilada
caadada neefsashada 100% qoyaanka polyester qoyaya shaati shaati
Shaadhkan shaashadda ahi wuxuu ka samaysan yahay 100% kaabis polyester ah, oo leh hawl wanaagsan oo degdeg ah oo qallalan. Way ku fiican tahay koox kasta oo isboorti oo dooneysa inay ka dhex muuqato dadka badan iyada oo la socota isbeddelka isbeddelka!
100% qoyaanka dhoobada dhoobada polyester
130gsm khafiif ah
Dharka aadka loo neefsan karo ee shaatiga isboortiga ayaa ah mid qafiif ah sidaa darteed kuma cusleyneyn doono kuleylka iyo huurka. Waxay ku imaaneysaa in ka badan 30 midab sidaa darteed waxaad ka heli kartaa midka saxda ah ee kooxdaada, hadey ciyaartu tahay kubbadda koleyga ama kubbadda kolayga. Oo waxaan u haynaa carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweyn, oo lagu daray cabirka sidoo kale waa la habeyn karaa.
Hore: xafiiska xafiiska caadada dharka suufka iskuulka caadada dharka daabacaadda astaanta shaati polo
Xiga: Post Next
Oem Ragga T-Shirt
T-Shirt Ragga Jumlada ah